शरीरको कुन ठाउँमा कोठी भए के हुन्छ ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / शरीरको कुन ठाउँमा कोठी भए के हुन्छ ?
admin January 3, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 74 Views
सामान्यतया मानिसको छालामा आउने काला वा अन्य रंगका दानालाई कोठी भनिन्छ | यो छालालाई रङ्ग प्रदान गर्ने कोषिका एकै ठाउँमा थुप्रिएर रहने अवस्था हो । विज्ञानको कोठीबारेकोई बुझाइ बेग्लै भएपनि समुद्रशास्त्रले भने कोठीले पनि मानिसको भाग्य निर्धारण गर्ने र कोठीकै आधारमा मानिसको भाग्य र व्यवहार बताउन सक्ने चर्चा गरिएको पाइन्छ ।
निधारमा कोठी: बलवान । चिउँडोमा कोठी: श्रीमान/श्रीमतीसँग खासै प्रेम नगर्ने र श्रीमान/श्रीमतीको खासै रेखदेख नगर्ने । दाहिने आँखामा कोठी: आफ्नी श्रीमतीसँग बहुत प्रेम गर्ने, श्रीमतीको निकै ख्याल राख्ने । देब्रे(बायाँ) आँखामा कोठी: श्रीमान/श्रीमतीसँग अक्सर बाझिरहने, दाम्पत्य जीवन दुःखी रहने ।
दाहिने गलामा कोठी: धनवान हुने । पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुने । देब्रे गलामा कोठी: बढी खर्चालु । ओठमा कोठी: बढी कामोत्तेजक, यस्ता मानिसको मनमा सधैँ कामनाको बास रहने गरिन्छ ।
कानमा कोठी: अल्पायुमै मृत्यु हुनसक्ने । गर्धनमा कोठी: यस्ता मानिस निकै सौखिन किसिमका हुन्छन् । सधैं आरामदायक जीवन जिउन चाहने । दाहिनेपट्टि हातमा कोठी: त्यस्ता मानिसलाई खुबै मान-प्रतिष्ठा मिल्छ । यस्ता मानिसहरुलाई समाजमा उच्च ओहोदा मिल्छ ।
दाहिनेपट्टिको हातमा कोठी: झगडालु स्वभाव । नाकमा कोठी: यस्ता मानिसलाई यात्रा गरिरहने अवसर प्राप्त हुन्छ । दाहिने छातीमा कोठी: स्त्रीप्रति प्रेम हुनुको संकेत । यस्ता पुरुषले आफ्नी पत्नीलाई खुबै प्रेम गर्छन् ।
देब्रे छातीमा कोठी: त्यस्ता मानिसहरुको आफ्नी श्रीमती वा अन्य महिलाहरुसंग कुनै न कुनै बहानामा झगडा भइरहन्छ । कमरमा कोठी: जिन्दगिभरि समस्याहरुसंग लडिरहनु पर्ने । पेटमा कोठी: राम्रो र मीठो खानाका सौखिन । पिठ्युँमा कोठी: आफ्नो जीवनकालमा कयौं यात्रा गर्ने ।
दाहिने हत्केलामा कोठी: बलवान हुनुको संकेत । देब्रे हत्केलामा कोठी: अत्यधिक खर्चालु स्वभाव । दाहिने खुट्टामा कोठी बुद्धिमान हुनुको संकेत । देब्रे खुट्टामा कोठी: यिनीहरुको खर्च अत्यधिक हुन्छ ।
Previous पोर्चुगल भएका श्रीमानले भिसा पठाएर आउन भने पनि आनाकानी गर्दै गरेकी प्रतिमा जब आफ्नै दाइको प्रेममा परेर गर्भवती बनिन्
Next प्र,ह,री,वि,रुद्ध नै उ,जुरी, तीन एसपीसहित ११ सय ४५ प्र,हरीमाथि का,रबाही…